WiXinee HR128 jedhu kan mata dureen isaa mirga namaa Itiyoophiyaa akka kabajamu fi bulchiinsi hunda himaachise akka jiraatu jajjabeessuu jedhu irratti miseensonni bakka bu’oota mana maree US baatii Caamsaa sagalee kennuuf jiru ka jedhu erga isaan dhaqqabee booda bakka bu’aan mana maree US Mike Coffman ibsa baasanii jiran.
Manni maree bakka bu’ootaa HR 128 irratti baatii Caamsaa dhufu sagalee akka kennuuf jiru har’a labsamuun isaa kanneen kana keessaa harka qaban maraan hojiin jabaa ta’e sa’aatilee hedduu ta’e hojjetamuu isaaf mirkanii dha.
Kunis Itiyoophiyaa keessatti mirga dhala namaa akka kabajamu akkasumas seeraaf buluun akka jiraatu gochuuf falmii uubatti hin jennetu geggeeffame.
Doolaarri kuma dhibba hedduu kan mootummaan Itiyoophiyaa baasu waan sirrii hojjechuu irratti faayidaa hin baafne.
Dhimmi kun mana marii bakka bu’oota duratti akka dhiyaatu gochuuf hoogganaan sagalee yayyabaa Kevin McCarty deggersa godhanii fi uummata sagalee guddaa qaban kan kutaa koo Koloraadoo fi kan Itiyoophiyaa keessaatti dabalameen galata dhiyeessa jedhan.
Miseensa mana maree kan ta’an Coffman wixinee kana kanneen akkaan deggeran keesaa ti. Wixineen kun humnootiin naga eegumsa Itiyoophiyaa humna ammaa ba’aa gargaaramuu dhaan ajjeechaa hiriirtota nagaa irratti raawwatanii fi seeraan ala hidhamuu qabsaa’otaa fi mormitoota mootummaa cimsee balaalteffata.
Namichi Tibba Darbe Haleellaa Boombitiin Magaala Ameerikaa Takka Shororkeessaa Ture Guyyaa Harraa Boombii Dhoosuun Of-ajjeese